Fiigicha guddicha Ityoophiyaa iddoon ka’umsaa fi ga’umsaa durii irraa jijjiirame – Fana Broadcasting Corporate
Fiigicha guddicha Ityoophiyaa iddoon ka’umsaa fi ga’umsaa durii irraa jijjiirame
Finfinnee, Onkololeessa 28,2011(FBC)-fiigicha guddicha Ityoophiyaa Sadaasa 9,2011 gaggeeffamu iddoon ka’umsaa fi ga’umsaa durii irraa gara siidaa wareegamtootaa kiiloo 6tti jijjiiramuu ibsame.
Fiigichi guddichi Ityoophiyaa yeroo 18ffaaf gaggeeffamu kanaan dura iddoon ka’umsaa fi ga’umsaa Addabaabaayii Masqalaa ta’uunsaa ni yaadatama.
Hoji gaggeessan olaanaa Fiigichi guddichi Ityoophiyaa obbo Ermiyaas Ayyalaa, guyyaan sagantaa kanaa akka tasaa ta’ee,yaa’ii hoggantoota Gamtaa Afrikaan guyyaa tokko ta’uu isaatin iddoon jijjiirame jedhaniiru.
Hoji gaggeessichi guyyaa fiigichaa jijjiiruu irra iddoo jijjiirun salphaa akka ta’e ibsaniiru.
Fiigicha kanarratti sadarkaa idil addunyaa irraa kan hirmaatan dabalatee namootni kuma 44 irratti ni hirmaatu jedhamee eeggama.
Haaluma kanaan, Addabaabaayii siidaa wareegamtoota kiiloo 6 kanarraa ka’uu karaa hospitaala Minilikiin,imbaasii Ingiliiz, gabaa Shoolaa naanna’uun riqicha Adwaan, Paarlamaa irraan darbuun siidaa wareegamtootaa kiiloo 6tti xumura argata.